अदालतमा खल्ते न्यायाधीशको बिगबिगी - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
२०७७ श्रावण १३, मंगलवार ०७:१०:००
काठमाडाैँ-जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको एउटा यस्तो वर्ग छ, जसले न्यायाधीश बन्न न्यूनतम योग्यता पनि पूरा गर्नुपरेन । न्यूनतम संघर्ष गर्नुपरेन । कतै योग्यता परीक्षा पनि दिनुपरेन । कुनै वंशभित्र जन्म लिनु, कुनै प्रभावशाली व्यक्तिसँग नाता वा स्वार्थ जोडिनु र कुनै वरिष्ठसँगै एउटै च्याम्बरमा अभ्यास गर्नु नै तिनको योग्यता हो ।
जसरी प्रतिष्ठित कुनै मन्दिर वा मठका वरिपरि रहने केटाकेटीले त्यस मन्दिरको प्रसाद चोरेर खाने विशेषाधिकार राख्छन्, यस वर्गका न्यायाधीशका हकमा पनि यस्तो छूट हुन्छ ।
यिनलाई सामान्यतः न्यायमूर्तिका हकमा लागू हुने बन्धनमा छूट हुन्छ । राम्रा अवसर सबभन्दा पहिला यिनले प्राप्त गर्दछन् । विदेश भ्रमण, तालिम, गोष्ठी, भत्तावाल कार्यक्रम, रोजेको ठाउँमा काज र सरुवा, कतिपय अवस्थामा रोजेका मुद्दा आदि यिनका अग्राधिकार हुन् ।
यस वर्गका न्यायाधीशको उत्पादन कुनै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अध्ययन अनुसन्धान वा न्याय कानुनकै कामको कारखानाबाट होइन, कुनै प्रभावशाली व्यक्तिको खल्तीबाट भएको हुन्छ ।
त्यसैले यिनलाई खल्ते न्यायाधीश भनिन्छ । यस्तै न्यायाधीशको हालीमुहाली छ अचेल । कुनै न कुनै प्रभावशाली पात्रको गोजीबाट निस्किने र तिनका गोजीसँग कुनै न कुनै सम्बन्ध राख्ने भएकाले न्यायिक नेतृत्व समेत तिनका स्वार्थभन्दा धेरै पर गएर निर्णय गर्न सकेको पाइँदैन ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई नै हेरौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आफन्त हुनु नै उनको प्रमुख योग्यता हो । त्यही भएर नै उनले सबै समकालीनहरुलाई पाखा लगाएर एकैपटक तीनचोटि बढुवा पाए ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाले आउँदाआउँदै पहिलो प्रशासनिक निर्णयमै उनलाई पाटनमा ल्याएर पुरस्कृत गरे । उनको नियुक्तिदेखि अहिलेको पाउनुका पछाडि ककसको हात छ भन्ने छुट्टै खोजी र बहसको विषय छ । ढिलोचाँडो बाहिर आउने नै छ । तर यहाँ उनी एक पात्रको मात्र कुरा नभई प्रवृत्तिको प्रसंग हो ।उनका नातेदार बेइज्जतीपूर्वक अदालतबाट निकालिँदा पनि उनी पुरस्कृत भइरहे । अहिलेसम्मका कुनै न्यायाधीशले पहिलो नियुक्तिमा मुख्य न्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका छैनन् । तर, उनले पाए । उपत्यकाबाहिर खासै बस्नु परेन ।
बरिष्ठको घॉटी निमोठ्ने त ! श्रीमान् ?
अहिलेसम्म न्यायपरिषदका हरेक पदाधिकारीले हरेक तहका न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो खल्तीबाट नाम झिकेर न्यायाधीशको टीका लगाइदिएका छन् । हरेकका खल्तीबाट नाम झिक्ने भएकाले एकअर्काका नाममा प्रश्न उठाउने र बहस गर्ने कुरै भएन ।
गान्धीका तीन बाँदरले जस्तो एकअर्काका कमजोरी छोप्न एउटाले नदेखेजस्तो गर्ने, अर्कोले बोल्न नसकेजस्तो गर्ने र झन् अर्कोले नसुनेजस्तो गर्ने संरचना नै न्यायपरिषद भएको छ । यसैको प्रतिफलस्वरुप अहिले देशभर न्यायाधीशको भीड छ ।
अदालतमा न्यायाधीशले काम पाउन अब नाराबाजी र जुलुस गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतमा गएर दुई घण्टा पनि काम नपाएर कतिपय न्यायाधीश दिउँसै बाहिर चिया चौतारीमा भेटिन थालेका छन् । कतिपय विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा चाकडी बजाउन पुगेको देखिन्छ ।
अदालतमा खल्ते न्यायाधीशको भीड भएकैले नयाँ प्रतिस्पर्धाबाट आएका २५ जना न्यायाधीशले हत्पत्ति नियुक्ति र कार्यथलो पाउन मुस्किल भएको छ ।
एउटा न्यायाधीशमाथि गाडी, चालक, इन्धन र अरु सुविधा समेत गरी राज्यको मासिक ५ लाखभन्दा बढी लगानी हुन्छ । तर, फैसलाको स्तरीयता मापन गर्ने हो भने धेरैको सिकारु वकिलको भन्दा गएगुज्रेको भाषा छ ।
यति ठूलो लगानीमा बिनाकामका मान्छे थुपार्ने काम किन हुँदै छ ? यो गम्भीर छानबिनको विषय हो । रामकुमार प्रसाद साहले कहिल्यै मिसिल नदेखेकी कम्प्युटर अपरेटरको काम गर्ने र न्यायकाे 'न' नजान्ने आफन्तलाई न्यायाधीश बनाइदिए ।
कतिपय न्यायपरिषदका पदाधिकारीका आफन्त वा अन्य नाता सम्बन्ध भएका न्यायाधीशका कारण सिंगो न्यायालय बदनाम र विवादित बन्नुपरेको छ ।
हालैको बुढानीलकण्ठको हिट एन्ड रन प्रकरणका अभियुक्तलाई छाड्ने न्यायाधीश होऊन् वा डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला, अदालतमा बढ्दो स्वेच्छाचारिता र कमजोर नियुक्तिका प्रमाण हुन् ।
त्यसैले हैसियतभन्दा बढी पाएका, पावर र आवरका भरमा अदालत प्रवेश गरेकाहलाई छानेर समय छँदै स्तरीयता विकास गर्ने अवसर दिलाउनु उचित हुन्छ । जो वास्तवमै आफ्नो योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन्, तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको सम्मुखमा रहेको न्यायपरिषदले यी पक्षतिर हेक्का राखेस् । अन्यथा, न्यायालयप्रति आमनागरिकको आस्था खस्किँदै जानेछ भने अदालतभित्र स्वेच्छाचारिता र दण्डहीनता मौलाउँदै जानेछ ।